Hide and Change Ip address with Firefox ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Firefox နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Hide and Change Ip address with Firefox
By သန့်ဇင်ဌေး11:27 AM5 comments
အဆင့် ၁.. ကျွန်တော်တို့ ဒီလင့်က https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2464 Add on လေးကို သွားပြီးတော့ Add to firefox ကို နိုပ်လိုက်ပါ.
အဆင့် ၄.. ဒ ဒီချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်လို့ မရတဲ့ဆိုဒ်တွေကို ကျော်ကြည့်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကျော်နိုင်တဲ့ Proxy ကို သွားယူရပါမယ်။ ဒီတော့ ဒီလင့်ကို http://www.ip-adress.com/proxy_list/?k=type သွားပါ။ ဒီလင့်ကိုရောက်ရင် နိုင်ငံအများကြီးနဲ့ တွေ့နေပါလိမ့်မယ် Check it ဆိုတာလေးကိုနိုပ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီ IP အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာကို ပြပါတယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ IP တကယ်ချိန်းသွားပြီလားဆိုတာကို ဒီလင့်မှာ http://www.whatismyip.com/ သွားစစ်ကြည့်လိုက်ပါ. … IP ပါ ချိန်းနေသလို နိုင်ငံတွေပါပြောင်းထားတဲ့အတိ်ုင်းချိန်းနေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ “
ဒီလိုဆို သုံးလို့ ရပါပြီ နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော် Proxy Software ကောင်းလေးတွေကို တင်ပြပေးပါဦးမယ်။အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
yan naing December 24, 2011 at 10:49 PM
notwo March 2, 2012 at 11:46 AM
အကို ကျွန်တော် တို့ ကျောင်း က proxy နဲ့ သုံးနေရတာပါ.. သူ က ဘန်းထားတဲ့ page တွေ ကို အကို ပြောသလို FoxyProxy သုံးပြီး ကျော်လည်း Problem loading page ပဲ တက်လာတယ်ဗျာ.. အဲ့ဒါ ဘယ်လို ကျော်လို့ ရမလဲ သိချင်လို့ပါ... ကျောင်းနက် က FB ကိုတောင် ဘန်းထားတယ်ဗျာ ပြီးတော့ downloading sites တွေ ကိုလည်း ဘန်းထားတယ်.. အဲ့ဆိုက်တွေ က ဒေါင်းချင်တာကိုဒေါင်းလို့ရအောင် ပါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်... ကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါဗျာ..
moesat November 29, 2012 at 10:57 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာဆိုတော့ အသိတိုးတာပေါ့ နောက်လည်း အကိုတို သိသလောက်တွေ ထပ်ပြီးမျှပေးပါအုန်း ရှဲ ... ရှဲ
စနေအောင်အောင် November 5, 2013 at 3:04 PM
fbမှာ တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုကိသုံးပြီုး သုံးစွဲသူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လိုက်လို့ရမလား သိချင်ပါတယ်
အကယ် အကောင့်မှာဖြည့်မထားတာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ပေးမထားရင် အိုင်ပီလိပ်စာနဲ့ သုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို လိုက်နိုင်ပါသလား
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ လက်ဆော့ပြီး ထင်ရာယူဆရာလေးတင်မိတာ အိုင်ပီလိပ်စာနဲ့စုံစမ်းမယ်ကြားလို့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိ ပြန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ဟန်းဖုန်းနဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်ရှယ်သုံးခဲ့တာပါ။please reply. .thanks
စနေအောင်အောင် November 5, 2013 at 3:06 PM